यस्तो न्युज पढ्नुभाको छ? ग्यारेजमा धुन दिएको गाडी रातारात पर्‍यो दुर्घटनामा, खबर सुन्दै चकित परे मालिक, हेर्नुहोस – TAJA KHAWAR
November 6, 2018 Taja Khawar समाज 1
पोखरा । पोखराको पुम्दीभुम्दीमामा ट्याक्सी दुर्घटना हुँदा एक जनाको मृत्यु भएको छ । ग्यारेजमा धुन दिइएको ट्याक्सी आज बिहान ६.३० बजे लिन जाँदा नभेटिएपछि ट्याक्सीधनीले प्रहरीमा खबर गरेका थिए। [तलको भिडियो हेर्नुहोला खास छ]
ग्यारेजका मालिक समेत बेखबर रहेको सो घटनाका बारेमा ट्याक्सी दुर्घटनापछि मात्रै हराएको र ट्याक्सी दुर्घटना भएको सत्य खबर बाहिर आएको हो। आइतबार ट्याक्सी धुन भनेर ट्याक्सी चालक राजु थापाले ग्यारेजमा ट्याक्सी छोडेका थिए। सोमबार बिहान जाँदा ट्याक्सी ग्यारेजमा थिएन । अनुसन्धानका क्रममा सोमबार राति दुर्घटना भएको ट्याक्सी नै उनको ट्याक्सी भएको प्रहरीको अनुसन्धानमा खुल्न आएको छ।
यो पढ्नुहोस:- यस्तो पनि आयो नया नेपालमा, प्रचन्डको सवारी अगाडि मोटरसाइकल चलाउँदा १५ सय जरिवाना
दुर्घटनामा अन्दाजी २४ वर्षीय सुमन पौडेल (सुवास) को मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ।मृतकको थप पहिचान खुल्न बाँकी छ । ग १ ज ५४३ नं को ट्याक्सी पोखरा २२ पुम्दीभुम्दीस्थित फलेंटेको मोडमा दुर्घटना भएको हो। ट्याक्सी सडकबाट ५०० मिटर तल खसेको थियो ।
मृतक पौडेलको घर कास्कीको कृस्तीमा छ। उनले सिक्नका लागि राति ट्याक्सी लगेको हुन सक्ने प्रहरीले अनुमान गरेको छ। वडा प्रहरी कार्यालय बैदामका प्रमुख नवीन कार्कीले त्यसबारेमा ट्याक्सी धनी जिरो किलोमिटरका प्रेमबहादुर गुरुङमाथि थप अनुसन्धान भइरहेको बताएका छ।
यो दुइटा छुट्यो कि? हेडमास्टर नै शिक्षिकासङ्ग मस्त प्रेममा चुर्लुम्म डुबेको बेला खिचियो यस्तो भिडियो हेर्नुहोस।
पुर्वराज ज्ञानेन्द्रलाई फेरि राजा बनाउने यो कसको षड्यन्त्र होला? यसरी भयो खुलासा
वैदेशिक रोजगारीको लागि कोरियामा रहेक एक नेपालीको मृत्यु, कसरी भयो र को हुन त? – News Mala